Maxaa Havana sidaas loogu yeedhay | Safarka Absolut
Maxaa loogu yeedhay Havana sidaas
La Habana, caasimada caanka ah ee firfircoon ee Cuba, waa magaalo laga yaqaan aduunka oo dhan. In yar oo la yaqaan si kastaba ha ahaatee waa asalka magaceeda, oo ay u leeyihiin dhowr aragtiyood. Maxaa Havana sidaas loogu yeedhay? Waxaan kuugu sharxeynaa khadadka soo socda.
Ugu horreyntii, waa inaad dib ugu noqotaa shan qarni taariikhda, illaa xilligii dhalashada magaalada. Havana waxaa la aasaasay sanadkii 1514, oo ka mid ahayd magaalooyinkii ugu horreeyay ee Isbaanishka ah ee Dunida Cusub. Magaca asalka ahaa Saint Christopher ee Havana, iyada oo aan waligeed si cad loo sharxin qeybta labaad ee magacan meesh. Si loogu daro jahawareer badan, khariidadaha iyo dukumiintiyada taariikhiga ah waxay umuuqdaan kuwo siyaabo kaladuwan uqoran: Havana, Abana, Havana ...
Laga bilaabo qarnigii XNUMXaad, waxay umuuqataa in is afgarad gaar ah lagu soo rogay markii magaalada la magacaabayo, iyadoo laga tagayo magaca Havana (oo leh "b") si hufan loo aasaasay.
Iyo San Cristóbal? Dareenkan shaki yar ayaa jira: waxay tilmaamaysaa Saint Christopher ee Lycia. Dhaqanku wuxuu sheegayaa in awliyadan ay ka caawisay cunug inuu ka gudbo webiga, kaasoo markii dambe u muujin lahaa inuu isagu yahay Masiixa laftiisa. Sababtaas awgeed, San Cristóbal waa daryeelaha wadayaasha iyo socotada.
Sannadihii ugu horreeyay, Havana waxay ahayd bar bilowga iyo imaatinka dhammaan noocyada socdaalka, baayacmushtariyaasha iyo tacabiirayaasha, sidaa darteed xulashada magacani waxay ka badnayd mid xaq ah.
1 Havana: aragtiyaha uu ka soo jeedo magaciisu
1.1 Dhaqanka Taino
1.2 Halyeeyo hore
2 Havana kahor imaatinka Isbaanishka
Havana: aragtiyaha uu ka soo jeedo magaciisu
Aragtiyaha isku dayaya in ay sharxaan asalka magaca caasimada Cuba waa kuwa ugu kala duwan. Xaqiiqdii midkood waa sax, laakiin waa wax aan macquul aheyn in la ogaado midka.
Sida laga soo xigtay taariikhyahanno badan, ereyga "Havana" wuxuu ahaan lahaa ereyga musuqmaasuq savannawaxa ku jira luqadda taíno (kan ay ku hadlaan dadka waddanka u dhashay ka hor imaatinka Isbaanishka) wuxuu noqon karaa "prairie". Waxaa la sheegay inay sidan ahayd sida loogu yeedhay gobolka koonfureed ee Havana iyo Matanzas, oo ah dhul ballaadhan.
The Tainos, oo ah deggeneyaasha asalka ah ee Cuba
Aragti kale, oo uu difaacay taariikhyahan reer Cuba ah Eusebio Leal Spengler, wuxuu difaacayaa in magaca magaaladu ka yimaado kan Habguanex, cacaaquun xoog leh oo xukumi lahaa dhulalka ay magaaladu taagan tahay maanta sannadihii ka horreeyey qabsashadii Isbaanishka.
Xamaasad ahaan, waa inaan soo qaadannaa daraasad luqadeed oo xad-dhaaf ah oo dhigaysa asalka magaca Havana ereyga Jarmalka Haven, oo macnaheedu yahay deked. Aragtida ayaa u jaban sababo fudud: ma jiraan wax dukumiinti ama caddeyn ah oo muujinaya joogitaanka jasiiradda cilmi-baarayaasha Jarmalka ama Nordic, xitaa Anglo-Saxons, kahor imaatinka Isbaanishka.
Waxaa laga yaabaa in sharaxaadda asalka magaca Havana laga helo mid ka mid ah kuwa badan halyeeyada deegaanka kuwaas oo dhashay xilligii gumaysiga. Inta badan taariikhyahannada iyo aqoonyahannadu ma siiyaan kalsooni badan, laakiin sikastoo ay ahaataba way mudan yihiin in la ogaado.
Kuwa ugu caansan dhammaan, ugu yaraan Cuba dhexdeeda, waa sheekada Hindiya Guara. Naagtan yari waxay jacayl u qaaday guuliye Isbaanish ah, oo ku sasabi lahaa iyada si ay macluumaad istiraatiijiyadeed uga hesho: goobta degsiimada asaliga ah ee ku dhex qarsoon hawdka taas oo wakhtigaas daboolay qayb ka mid ah halka Havana ay maanta taagan tahay.
Guara waxa uu garwaaqsaday qaladkiisa goor dambe, markii uu arkay kuwa guulaysta oo magaalada ku soo qulqulaya halkaasna xasuuq ka gaystay. Guara oo dareentay dambi, ayay waalatay waxayna isku tuurtay dabka. Markay arkaan goobta, kuwa ka badbaaday musiibada waxay ku soo celcelin doonaan erayga "abana", oo luqadda Aruaca macnaheedu noqon lahaa "way waalan tahay".
Halyeey kale, oo ka murugo yar kana dhiig yar kii hore, wuxuu xaqiijinayaa in maraakiibtii ugu horeysay ee ku xirtay maanta waxa maanta socdaalku ay u direen doonyo taxane ah dhul weynaha. Markay xeebta gaadheen, gabadh Hindi qurux badan oo dhalaalaysa ayaa ka soo salaantay dusha dhagax weyn. Isbaanishku waxay weydiisteen magaca goobtaas, taas oo haweeneyda Hindida ah, iyadoo gacmaheeda u fidinaysa sidii ay dooneyso inay ku wareejiso muuqaalka oo dhan, waxay ugu jawaabeen hal eray oo ah: "Havana," ka hor inta aan lagu baabbi'in indhahooda hortooda si aan dib dambe loo arki doonin.
Havana, caasimadda Cuba, sawir hadda jira
Havana kahor imaatinka Isbaanishka
In kasta oo ay jiraan wax shaki ah oo arrintan la xiriira, haddana waxaa si rasmi ah loo oggol yahay in taariikhda la aasaasay Havana ay tahay Nofeembar 16, 1514, markii loo dabaaldegayay tiradii ugu horreysay ay ka dhacday magaalada cusub ee la aasaasay. Laakiin dhab ahaantii taariikhda meeshan ayaa aad uga facweyn iyo, nasiib daro, wax yar baa la yaqaan.
Sidoo kale lama oga halka ay ku taallo tuulada Hindiya ee ka horraysay magaalada gumeystaha, illaa iyo hadda lama helin wax raad ah oo taariikhi ah oo ka marag kacaya.
Taariikhyahanno badan ayaa rumeysan inay haystaan ​​caddeyn ku filan oo lagu xaqiijinayo in degitaankii ugu horreeyay ee Isbaanish ah, oo ku yaal isla meesha ay ku taal magaalada asaliga ah, ay ku taal dhawr kiilomitir koonfur ka xigta goobta hadda ee Havana. Degitaankan ugu horreeyay ayaa si tartiib tartiib ah looga tagey magaaladuna "way dhaqaaqday" sannadihii ugu horreeyay nolosheeda illaa heer u dhow Wabiga Almendares.
Waqtigan xaadirka ah, kuwani waa mala-awaal keliya. Haddii ay jiri laheyd Havana kahor imaatinka Isbaanishka, wali wey ka qarsoon tahay indhahayaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Maxaa loogu yeedhay Havana sidaas
Noocyada TV-yada ugu caansan Shiinaha